सम्मान सहित सेयर गरौ ! यी बाबुको एउटा महानताले संसारलाई चकित बनाइदियो - सुदूर नेपाल
सम्मान सहित सेयर गरौ ! यी बाबुको एउटा महानताले संसारलाई चकित बनाइदियो
हामीले सवारीसाधनले बाटाेमा हिडिरहेकाे कुनै मानिसलाइ ठक्कर दिएर भागेकाे खबर धेरै पटक सुनेका छाै । यस्ता धेरै घटनाहरू छन जुन मानवताकाे नाममा कलङ्कता हुन । मानिसबाट गल्तिबस कुनै घछनानै भयाे भनेपनि त्यसलाइ समाधान गर्ने भन्दा पनि लुकाउने कुरा साेच्छ र त्याे दाेषबाट भाग्ने प्रयास गर्छ । तर भारतमा घटेकाे एउटा सानाे घटनाले यतिबेला संसारभरका धेरैकाे मन छाेएकाे छ ।
भारतमा आश्चर्यजनक तर कारणिक घटना घटेको छ । भारत मिजोरम राज्यका एक बालकको साइकलले दुर्घटनाबस कुखुराको एउटा चल्ला किच्यो । त्यसपछि जे भयो, त्यसले धेरै मानिसमा एकसाथ आश्चर्य, करुणा र मानवताको भाव पैदा गरायो । इन्डिया टाइम्स डटकमका अनुसार ती बालकले चलाएको साइकलले गल्तीबस छिमेकीको चल्ला किच्यो। त्यसपछि उनी आफूसँग भएको पैसा र चल्ला बोकेर तत्कालै नजिकैको अस्पतालमा उपचार गर्न पुगे । याे कुरा सुन्दा हामी सबैलाइ कता कता छाेइरहेकाे आभाष भैरहेको छ भने त्यो दृश्य नाजिकबाट आफ्नै आखाले देख्नेलाई नछुने कुरै भएन ।
आफ्नो गल्तिबाट चल्लालाई चोट लाग्दा त्यो पनि जानी जानी गरिएको गल्ति थिएन । त्यी बालक रुपिया बोकेर अस्पतालसम्म पुग्ने योजनामा पुगे । त्यो कलिलो बालमस्तिष्कमा देखिएको त्यो उदाहरणीय सोचलाई सबैले सम्मान गरेका छन् । त्यो तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट भयो लगत्तै हजारौले सेयर गरे, जसमा सयौ प्रतिक्रिया जनाइयो । यो तस्बिर यतिखेर भारतका साथै धेरैतिर भाइरल बनेको छ ।
Previous Post: सपना उडायो सबै हुरीले! बिहान खाना खाएर बजार गए, साँझ फर्कदा…(भिडियो)
Next Post: हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! हेर्नुहोस आजको राशिफल:२०७६ जेठ १७ शुक्रबार